Mpanamboatra sy mpamatsy akora manta |China Raw Material Factory
Manamboara Organo Gold Organ...
Ganoderma Cafe fivarotana mafana ...
Vaky ny rindrina cellule organika betsaka...
Coff holatra sigmatic efatra...
Vovoka holatra Chaga
Chaga, fantatra amin'ny anarana hoe Inonotus obliquus, dia holatra fanafody izay maniry amin'ny hazo birch fotsy.Izy io dia mitombo indrindra any amin'ny ila-bolantany avaratra amin'ny latitude 40 ° ~ 50 ° N, izany hoe, Siberia, Far East, Northern Europe, Hokkaido, Korea Avaratra, Heilongjiang any avaratr'i Shina, Changbai Mountain any Jilin, sns.
Coriolus versicolor - fantatra ihany koa amin'ny hoe Trametes versicolor sy Polyporus versicolor - dia holatra polypore mahazatra hita manerana izao tontolo izao.
Coriolus versicolor dia holatra fanafody voatendry betsaka amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny homamiadana ary ny aretina any Shina.Voaporofo be dia be fa ny akora azo avy amin'ny Coriolus versicolor dia mampiseho karazana hetsika biolojika isan-karazany, ao anatin'izany ny fiantraikany manaitaitra amin'ny sela immune samihafa sy ny fanakanana ny fitomboan'ny homamiadana.
Vovoka holatra Shiitake
Ny holatra Shiitake (anarana siantifika: Lentinus edodes) dia antsoina hoe Shiitake any Japon.Ny holatra Shiitake dia nambolena tao Shina nandritra ny an'arivony taona.Ny holatra Shiitake dia misy karazana akora biolojika mavitrika izay nohamafisin'ny fikarohana siantifika.Manana anjara toerana lehibe amin'ny fandrindrana ny hery fiarovana izy ireo, mampitombo ny fahasalaman'ny taolana, mampihena ny kolesterola ary mampiroborobo ny fahasalaman'ny fo.
"Maitake" dia midika hoe holatra mandihy amin'ny teny japoney, ny anarany latina: Grifola frondosa.Voalaza fa nahazo ny anarany ny holatra rehefa nandihy tamim-pifaliana ny olona rehefa nahita azy tany an'ala, izany no toetra mahasitrana azy.
Grifola frondosa dia misy karazana akora biolojika mavitrika izay nohamafisin'ny fikarohana siantifika.Izy ireo dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampihenana ny tosidra, ny fampidinana siramamy ao amin'ny ra, ny fanamafisana ny hery fiarovana, ny anti-inflammatoire ary ny anti-allergy.
Ny Cordyceps militaris (anarana siantifika: Cordyceps militaris) sy ny Cordyceps sinensis (anarana siantifika: Cordyceps sinensis), fantatra amin'ny anarana hoe holatra angovo, dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana sinoa mba hamelomana ny havokavoka sy ny voa, ary miaro ny fo.
Vovoka holatra holatra Lion's Mane
Ny holatra liona (Hericium erinaceus) dia karazana holatra fanafody.Efa ela no nampiasaina tamin'ny fitsaboana Shinoa nentim-paharazana, ny mane liona dia be dia be amin'ny endrika fanampim-panampiana.Asehon'ny fikarohana siantifika fa misy akora mandrisika ny fahasalamana maro ny mane, anisan'izany ny antioxidants sy ny beta-glucan.
Ny holatra Lion's mane dia misy karazana akora biolojika mavitrika izay nohamafisin'ny fikarohana siantifika.Manana anjara toerana lehibe amin’ny fiarovana ny vavony izy io, ny fanamboarana ny nerveuses amin’ny ati-doha, ny fanatsarana ny fitadidiana sy ny fahaiza-misaina, sns.
Ambongadiny Organic Ganoderma lucidum Extract
Ny fitrandrahana Ganoderma lucidum dia vatana voankazo vao masaka voajinja ara-potoana.Aorian'ny fanamainana dia mampiasa ny fitrandrahana rano mafana (na ny fitrandrahana alikaola), ny fifantohana amin'ny banga, ny fanamainana ary ny dingana hafa mba hahazoana vovobony Ganoderma lucidum, izay avo lenta amin'ny vovo-dronono Ganoderma lucidum
Organic Cell-rindrina tapaka Ganoderma lucidum Spore vovoka
Ny spores Ganoderma dia sela fananahana vovoka mivoaka avy ao amin'ny satrobon'ny Ganoderma rehefa lasa matotra ny vatana mamoa.Ny spora tsirairay dia 5-8 microns fotsiny ny savaivony.Ny spore dia manankarena amin'ny akora bioactive isan-karazany toy ny Ganoderma polysaccharides, triterpenoids ganoderic asidra ary selenium.
Coriolus versicolor sy Polyporus versicolor - dia holatra polypore mahazatra hita manerana izao tontolo izao.Ny dikan'ny hoe 'loko maromaro', versioncolor dia mamaritra ity holatra izay maneho loko samihafa ity.Ohatra, satria mitovy amin'ny an'ny vorontsiloza bibidia ny bikany sy ny lokony maro, ny T. versicolor dia matetika antsoina hoe rambony vorontsiloza.
Ganoderma organika ho an'ny vokatra fikarakarana ara-pahasalamana
GanoHerb organika ganoderma sinense silaka dia tetehina avy amin'ny vatan-kazo vao voafantina tsara voavoly organika ganoderma sinense voankazo.Ireo silaka voatetika tsara dia azo ampiasaina mivantana amin'ny fanaovana dite ganoderma, fandrahoana lasopy ary fanaovana divay.Safidy tonga lafatra ny mitazona ny fahasalamana isan'andro, ny fitsaboana amin'ny sakafo ary ny fanomezana ho fanomezana.1. Famaritana: 20kgs / boaty 2.Fotoana lehibe: Afaka manampy amin'ny famelomana ny fahaveloman'ny mpampiasa izany ary manamaivana ny tsy fahampian-tsakafo, ny kohaka, ny asma, ny palpitation ary ny tsy fahampian-tsakafo.3. Fampiasana &...
Vidiny ambongadiny Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Oil Softgel
Ity menaka spore ity dia mampiasa teknolojia fitrandrahana CO2 supercritical mba hanesorana ireo spores matotra tsy misy rano, izay amboarina amin'ny alàlan'ny fomba fanangonana, fanadiovana, fitiliana, fanapotehana ny rindrina ara-batana ambany hafanana.
Slices Ganoderma lucidum organika
Ny orinasanay dia ny Drafter of Chinese National Standard for Ganoderma lucidum (na antsoina hoe Reishi), Ganoderma lucidum (na antsoina hoe Reishi) singa roa lehibe dia Ganoderma Lucidum (reishi) Polysaccharide sy Triterpene.